မြန်မာ ၁ဝဝဝ ခန့် လုပ်ကိုင်နေသော ထိုင်းဆိုဖာစက်ရုံ မီးလောင်မှုကြောင့် အလုပ်သမားများ အလုပ်လက?? - Yangon Media Group
မြန်မာ ၁ဝဝဝ ခန့် လုပ်ကိုင်နေသော ထိုင်းဆိုဖာစက်ရုံ မီးလောင်မှုကြောင့် အလုပ်သမားများ အလုပ်လက??
မြန်မာလုပ်သား ၁ဝဝဝ ခန့်လုပ်ကိုင်နေသည့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဆိုဖာစက်ရုံတွင် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက မီး လောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ နခွန်ပထုန်မြို့ နယ်၊ အုန်းနွဲ့စိုင်းဟရှိ Lotus အမည်ရှိဆိုဖာစက်ရုံ၌ အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက် ထိုင်းစံတော်ချိန် နံနက် ၇ နာရီခန့်တွင် ကုန်ကြမ်းဂို ဒေါင်မှ လျှပ်စစ်ဝိုင်ယာရှော့ခ်ဖြစ်ကာ မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းစက်ရုံတွင် MoU လုပ်သား များအပါအဝင် မြန်မာလုပ်သား ၁ဝဝဝ ခန့် အလုပ်လုပ်နေသည့် စက်ရုံဖြစ်ပြီး စက်ရုံ၏ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့် မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သဖြင့် မြန်မာလုပ်သားများ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မည့်အနေအထား ရှိနေ ကြောင်း ထိုင်းအခြေစိုက် AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့မှ သိရသည်။
”စက်ရုံက ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်း လောက်က မီးလောင်လို့ကုန်သွား ပြီဆိုတော့ အလုပ်သမားတွေက အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားမယ့် အနေအထားပဲ။ အကုန်လုံးကတရားဝင်လုပ်သားတွေချည်းပဲ။ MoU စစ် စစ်ဘယ်နှယောက်ပါလည်းဆို တာတော့ ပြန်ပြီးတော့ မနက်ဖြန်မှစာရင်းကောက်ရမယ်”ဟု AAC မှ ကိုရဲမင်းကပြောသည်။ အဆိုပါစက်ရုံသည် ဆိုဖာ၊ မွေ့ရာ၊ ခေါင်းအုံး စသည့်အိမ်တွင်း ပစ္စည်းများချုပ်လုပ်သည့်စက်ရုံ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းစက်ရုံတွင် ထိုင်းလုပ်သား ၁ဝဝ ကျော်သာရှိ ပြီး မြန်မာလုပ်သားအများဆုံးရှိသည့်စက်ရုံဖြစ်ကြောင်း ကိုရဲမင်းကဆက်လက်ဆိုသည်။
”အလုပ်သမားတွေကတော့ သူတို့က အပြင်ကအဆောင်တွေ မှာငှားနေကြတာဆိုတော့ သူတို့ နေထိုင်ရေးကတော့ လောလော ဆယ်ပြဿနာမရှိဘူး။ ပြီးတော့ အလုပ်ချိန်အထွက်၊ အဝင်အချိန် ဖြစ်တာမို့ အလုပ်သမားသေဆုံးတာတို့ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကတော့ မကြားရဘူး။ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ စက်ရုံက မနက်ဖြန်တော့အစည်းအဝေးခေါ် မယ်ပြောတယ်။ အဲဒီအလုပ်သမား တွေအတွက် တစ်ခုခုတော့ပြောမှာ ပေါ့။ ထိုင်းဥပဒေအရတော့ အဲဒီလိုစက်ရုံတွေမီးလောင်တာတို့ဘာတို့ဆိုရင် အလုပ်သမားတွေအကျိုးခံစားခွင့်က ဘာမှမရှိသလောက်ပါပဲ။ အလုပ်ပြောင်းဖို့ဆိုတာလည်း အလုပ်သမားကပိုက်ဆံပေးရဦးမယ် ”ဟု ကိုရဲမင်းကဆိုသည်။ အလုပ်သမားများ အလုပ် ပြောင်းရွှေ့ခွင့်အမြန်ရရှိရေးအတွက် အလုပ်သမားသံအရာရှိထံ သတင်းပို့ပေးထားကြောင်း၊ အလုပ်သမားများအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် အလုပ် ပြောင်းခွင့်အခြေအနေများကိုမူ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်မှသာသိရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုရဲမင်းက ဆိုသည်။
စာရေးဆရာမ ခင်နှင်းကြည်သာ အပါအဝင် စာရေးဆရာ သုံးဦးတို့၏ စာအုပ်များ မိတ်ဆက်ပွဲနှင့် ရေးသူ၊ ဖ?
တရားမဝင် သယ်ဆောင်လာသည့် ကျောက်စိမ်းတုံး ကီလို ၇၆ဝ ကျော်ကို ရေပူ အမြဲတမ်းစစ်ဆေးရေး စခန်းတွင?
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် တရုတ်နှင့် ရုရှားအပါအဝင် အရှေ့နိုင်ငံများမှ ရဟတ်ယာဉ်များ ဝယ်ယူမည်
ရေနံများကို ပြည်ပမှတင်သွင်းသောဆီဘောက်ဆာကားများဖြင့်သာ သယ်ယူခွင့်ပြုတော့မည်
မန်းအိမ်ခြံမြေဈေးကွက် အတွင်း ငှားရမ်းခနှုန်း အနည်းဆုံး ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာ
ကာတာလိုးနီးယား အရေး စပိန်အစိုးရ အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ကျင်းပ
Share 443 Tweet 0
ဟန်းဆက်ဖိုးငွေ ကျပ်သိန်း တစ်ထောင်ကျော် ရလိုကြောင်း တရားစွဲဆိုမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ရင်ဆိုင်သွား